Sidee ayuu udhacay aaska Allaha unaxariistee Garaad Cabdilaahi Cali Ciid? (daawo) – Radio Daljir
Sidee ayuu udhacay aaska Allaha unaxariistee Garaad Cabdilaahi Cali Ciid? (daawo)
Nofeembar 21, 2020 12:34 g 0
Allha unaxariistee waxaa maanta degmada Badhan ee gobolka Sanaag lagu aasay Garaad Cabdilaahi Cali Ciid oo ahaa Afhayeenkii Isimada Puntland oo labo habeen ka hor ku dhintay dalka Turkiga.
Aaska marxuumka ayaa waxaa ka soo qeybgalay Gudoomiyaha Golaha Wakiillada Dawladda Puntland Mudane Gudoomiye Abdirashid Yusuf Jibril oo uu wehliyo, Gudoomiye ku xigeenka 1aad Hon. Abdiaziz Abdullahi Osman, Wasiiro, Xildhibaanno ka tirsan DFS iyo Puntland, Isimo, Maamulka Gobolka Sanaag, kan degmada Badhan, iyo dadweyne aad ufarabadan oo ka qeybgalka aaska uga yimid sagaalka gobol ee Puntland.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Abwaan ayaa salaatul Jinaasada iyo aaska kadib u duceeyey Marxuum Garaad Cabdulaahi Cali Ciid oo ka mid ahaa hormuudka Golaha dhaqanka Puntland, kana shaqeyn jiray nabadeynta iyo xallinta khilaafadka bulshooyinka.
“Waxaan maanta halkan ku aasnay marxuum Garaad Cabdulaahi Cali Ciid oo kamid ahaa tiirarka Dowladnimada Puntland, Alle naxariistii Jano ha siiyo inagana Samir iyo iimaan Alle ha inaga siiyo, nin Rabbi yaqaan oo caadil ah buu ahaa, si gaar ah waxaan uga tacsiyaynayaa Golaha dhaqanka, eheladiisa iyo guud ahaan bulshada Puntand ” Ayuu yiri Gudoomiyaha Golaha Wakiiladda Dowladda Puntland.
Maxaa looga hadli doonaa Shirka wada-tashiga Musharixiinta Madaxweynaha ee Muqdisho? (daawo)
Xulashada Daljir & Cabdixakiin Xuseen Xasan, Daljir Garoowe (daawo)